Guddoomiye Muufo: “Mashaariicda ugu badan Madaxweyne Deni ayaa degmada Jarriiban ka hirgaliyey ma waxaan ugu abaalgudi karnaa waxba ma qaban? (dhegayso) – Radio Daljir
Oktoobar 27, 2019 3:57 g 0
Guddoomiyaha degmada Jariiban Maxamuud Maxamed Muufo ayaa wax laga xishoodo ku tilmaamay hadalkii shalay ka soo yeeray Xildhibaan Cawil Daad oo kamid ah golaha wakiilada Puntland, horena uga mid ahaa xukuumaddii dhacday ee Madaxweyne Gaas.
Guddoomiye Muufo waxa uu sheegay in mudadii ay jirtay xukuumada Madaxweyne Deni mashaariic farabadan ay ka hirgalisay gobolka Mudug, siiba Jarriiban iyo Garacad, kuwaas oo aan horay looga baran dowladihii kala duwanaa ee Puntland soo maray. Sidaas darteed Guddoomiye Muufo waxa uu shacabka ugu baaqay in ay xukuumada isgarabtaagaan.
Guddoomiyaha ayaa hadalkaas ka sheegay munaasabad lagu abaalmarinayey qaar kamid ah macalimiinta Dugsiyada Hoose iyo Sare ee degmada Jariiban.
Madaxweyne Trump oo ku dhawaaqay inuu dhintay Hoggaamiyihii Daacish